Sony RX1R, waxaan ku tijaabinay kamaradan isku dhafan oo leh firidh Frame Full ah | Wararka Gadget
Sony RX1R, waxaan ku tijaabinay kamaradan is haysta oo leh shidma Frame Full
Nacho Cuesta | | Sawir
La Sawirka Sony RX1R Waa layaab farsamo oo ka dhex jirta qaybta sawir qaadista. Jirka kamaradaha is haysta, shirkaddu waxay awood u yeelatay inay ku darto dareemayaal qaab-buuxa ah iyo Carl Zeiss optics kuwa doonaya inay ku guuleystaan ​​heerka ugu sarreeya ee faahfaahintooda sawiradooda.
Kahor intaadan guda galin shaashadda uu Sony RX1R awood u leeyahay inuu qaado, aan dib u eegis deg deg ah ku sameyno dhammaan tafaasiisha si aad u ogaato faahfaahin dheeraad ah waxa aan heli doonno:
24,3 megapixel shidma jir buuxa
Carl Zeiss Sonnar T 35mm f / 2.0 muraayadaha aan la isku beddeli karin
Ugu badnaan ISO: 25.00
Filaash la dhisay
3 inch shaashad
Full HD duubista fiidiyowga ilaa 50fps
Miisaan: 482 garaam
Cabir: 113,3 x 65,4 x 69,6 mm
Sida aad u aragto, kuma dhacdo gaaban faahfaahinta inkastoo waxaad u xiisay waxyaabo qaar sida joogitaanka daawade, wax lagu xallin karo iyadoo si gooni ah loo iibsado oo lagu xiro kabaha kaas oo qalabka kale sidoo kale lagu xidhi karo.
Heerka bilicsanaanta, Sony RX1R waxaa ka go'an khadad fudud laakiin aad u qurux badan, Ka dhigaya kamaradda si dhib leh in dadka laga dhex arko marka laga reebo giraanta liinta ee bixisa muraayada Carl Zeiss. Sony waxay u isticmaashay waxyaabo ay ka mid yihiin magnesium soo saarista kiiska sidaas darteed kartida kamaraddu waa mid cajiib ah, waa wax la mahadiyo isla marka aan qaadno markii ugu horeysay.
Marka laga hadlayo ergonomics, dadka isticmaala gacmo waaweyn (sida kiiskeyga oo kale) waxay leeyihiin dareen ah in kaamirada ay naga baxsan karto laakiin waa arrin la qabsi ah si looga takhaluso dareenkan beenta ah. Muddadan ka dib, waxaan ogaan doonnaa in dhammaan wicitaannada u oggolaanaya xakamaynta xulashooyinka kala duwan ee kamaradda ay ku yaalliin meel aad ugu habboon, u oggolaanaya beddel setinka ilbiriqsiyo iyada oo aan loo baahnayn inaad la dhex gasho menus adag.
Haddii aan ka hadalno tayada muuqaalka, waa halkaan Sony RX1R ayaa buux dhaafiya oo soo saaraya midabada kamaradaha badan Ka imanaya suuqa. Qalabka loo yaqaan 'Sony' iyo 'optics' ee la xushay ayaa siiya natiijooyin cajaa'ib leh duruufaha oo dhan. Fiiqnaanta ayaa ugu badnaan iyo heerka faahfaahinta waa mid aad u sareysa, oo u oggolaaneysa in la helo sawirro soo jiita dad badan, gaar ahaan haddii aan ka hadlayno makro ama sawirro ay saamaynta bokeh aad u joogto.
Faahfaahin kale oo ku saabsan Sony RX1R waa in ay ka duwan tahay RX1 taas Sony ayaa hoos u dhigtay miiraha hoose ee gudbinta indhaha (OLPF) si loo sii wanaajiyo fiiqnaanta oo looga faa'iideysto dareemahan qaabdhismeedka buuxa.
Xaalada sawirka habeenkii, dareemahu wuxuu ina tusayaa awooddiisa buuxda iyo Waxay u oggolaaneysaa la shaqeynta ISOS sare iyada oo aan la maqlin dhawaq. Qiyamka ugu badan waa in lagu qasbaa si tayada sawirku u dhibto, laakiin guud ahaan, waxqabadka qaybtan ayaa aad u wanaagsan. Waa in la sheegaa in dareeraha ku jira Sony RX1R uu la mid yahay kii aan ka helnay Sony A99 ee helay dib u eegista wanaagsan.
Shaashadda saddexda-inji ah ee 'Sony RX1R' waa mid aad u adag oo isticmaasho Teknolojiyada Triluminos, taas oo ka dhigaysa aragtida sawirada dhexdeeda mid lagu farxo. Waa wax iska caadi ah in shaashaddan shaashaddu ku dhex jirto kamarad sidan oo kale ah, maqnaashaha goob-jooge ayaa mas'uuliyad badan ka saaraya.
Way cadahay in Sony RX1R ay tahay kamarad soo jiidasho leh oo awood u leh inay hesho sawirro xirfad leh, haa, qiimaheeda 3.099 euros waxay noqon doontaa caqabada ugu weyn ee haysata.
Xiriir - Sony RX1R
Sawirka sawirada lagu qaaday Sony RX1R:
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Sony RX1R, waxaan ku tijaabinay kamaradan is haysta oo leh shidma Frame Full
Falanqaynta Birta Gear Adag V: Gero Zeroes
Si dhakhso leh u maaree fiidiyowyada nooc kasta oo aad ku leedahay iPad-ka iyo Mac-ga